OTU ESI EJI GOOGLE PLAY MARKET - GWUO AHIA - 2019
Otu esi eji Google Play Market
Na usoro nke iji ọrụ netwọk mmekọrịta ndị mmadụ na-arụ ọrụ, ọ nwere ike ịdị mkpa ka ị gbanwee akara ọkọlọtọ na ihe mara mma. N'ụzọ dị mwute, ọ gaghị ekwe omume ịmepụta ihe ndị dị mkpa nke akụ a, ma a ka nwere ndụmọdụ, nke a na-atụle n'isiokwu a.
Gbanwee font VK
Nke mbụ, gee ntị n'eziokwu ahụ bụ na iji ghọtakwuo nkebi isiokwu a, ị ga-ama ama ederede nke ibe weebụ - CSS. N'agbanyeghị nke a, ịgbaso ntụziaka ahụ, ị ​​nwere ike ịgbanwere ụdị ahụ.
Anyị na-akwado ka ị gụkwuo isiokwu ndị ọzọ banyere isiokwu nke mgbanwe font na ebe nrụọrụ weebụ VK iji mara banyere ngwọta ọ bụla a ga-enye maka nsogbu a.
Uzo esi edeba ederede VK
Esi mee nkwuwa okwu VK
Kedu esi eme ihe ederede VK
Banyere ngwọta a chọrọ, ọ na-agụnye iji mgbatị dị iche iche nke pụrụ iche maka ihe nchọgharị Ịntanetị. N'ihi ụzọ a, a na-enye gị ohere iji ma mepụta isiokwu ndị dabeere na mpempe akwụkwọ nke VK.
Ihe mgbakwunye a na-arụ otu ụzọ ahụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe nchọgharị weebụ ọgbara ọhụrụ, dịka ọmụmaatụ, anyị ga-agwa Google Chrome naanị.
Rịba ama na n'usoro ịgbaso ntụziaka ahụ, na ihe ọmụma kwesịrị ekwesị, nwere ike ịgbanwe kpamkpam imepụta nke saịtị VC, ma ọ bụghị naanị na font.
Ngwa nke kachasị maka ihe nchọgharị Ịntanetị enweghi ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti, ị nwere ike ibudata ya na ụlọ ahịa add-ons. Nhọrọ niile gbasaa na-adị na ntọala zuru oke.
Gaa na ụlọ ahịa ụlọ ahịa Chrome
Iji njikọ ahụ nyere, gaa na ebe obibi nke ụlọ ahịa tinye-ons maka nchọgharị weebụ Google Chrome.
Iji igbe ederede "Nnyocha ụlọ ahịa" chọta ebe ndọtị ahụ "Echa".
Iji mee ka nchọpụta ahụ dị mfe, echefula ka ịtọọ isi na ihu ihe ahụ. "Ọpụpụ".
Jiri bọtịnụ "Wụnye" na ngọngọ "Ụdị - agbadoro omenala maka saịtị ọ bụla".
Ọ bụ iwu na ị kwadoro itinye ntinye n'ime ihe nchọgharị weebụ gị site na ịpị bọtịnụ ahụ "Wụnye ndọtị" na igbe.
Mgbe i mechachara aro ndị ahụ, a ga-echegharị gị na saịtị na-agbasa. Site na ebe a ị nwere ike iji nyocha maka isiokwu ndị dị njikere ma ọ bụ mepụta ihe ọhụụ zuru ezu maka saịtị ọ bụla, gụnyere VKontakte.
Anyị na-akwado ka ị mata nyochaa vidiyo nke ntinye a na ibe.
Na mgbakwunye, a na-enye gị ohere ịdebanye aha ma ọ bụ nye ikike, mana nke a adịghị emetụta ọrụ nke ndọtị a.
Rịba ama na ndebanye aha dị mkpa ma ọ bụrụ na ị ga-emepụta atụmatụ VC ọ bụghị naanị maka onwe gị, kamakwa maka ndị ọzọ nwere mmasị na ndọtị a.
Nke a mezue usoro nhazi na nkwadebe.
Anyị na-eji ụdị ejiji
Dị ka e kwuru, ngwa ngwa ahụ na-enye ohere ọ bụghị nanị ịmepụta, kama na-ejikwa ụdị ndị ọzọ na saịtị dị iche iche. N'otu oge ahụ, ọrụ ntinye a na-arụ ọrụ nke ọma, na-enweghị nsogbu nsogbu, ma nwee nnukwu ihe jikọrọ ya na ndapụta nke anyị tụlere n'otu n'ime isiokwu ndị mbụ.
Hụkwa: Otu esi esi wụnye isiokwu VK
Ọtụtụ isiokwu ndị a na-emepụta agbanweghị ụdị isi nke saịtị ahụ ma ọ bụ emebeghị ka emelite ha maka ihe ọhụrụ VK saịtị, ya mere kpachara anya mgbe ị na-eji ya.
Gaa na peeji nke kachasị mma
Meghee ihu-akwukwọ nke ozo.
Iji ngọngọ na edemede "Ebe kachasị mma" na aka ekpe nke ihuenyo gaa mpaghara "Vk".
Chọta isiokwu na-amasị gị kacha ma pịa ya.
Jiri bọtịnụ "Wụnye Style"ịtọ isiokwu ahọrọ.
Echefula ka ikwenye nwụnye!
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe isiokwu ahụ, ị ​​ga-achọ ịkwụsị ọrụ ahụ ejibu.
Biko mara na mgbe ị wụnye ma ọ bụ hichapụ isiokwu, a na-emelite atụmatụ ahụ ozugbo, na-enweghị mkpa ka iweghachị ọzọ weghachite.
Anyị na-arụ ọrụ na onye nchịkọta akụkọ
Mgbe ị na-eme mgbanwe mgbanwe dị iche iche site na iji isiokwu ndị ọzọ, ị nwere ike ịga n'ihu na omume onwe gị gbasara usoro a. Maka nke a, ị ga-ebu ụzọ mepee nchịkọta akụkọ pụrụ iche maka Mgbatị ahụ.
Gaa na saịtị ahụ VKontakte na ịnọ na ibe ọ bụla nke akụ a, pịa na akara ngosi ihe ntanye na ngwá ọrụ pụrụ iche na ihe nchọgharị ahụ.
Mgbe ị mepee menu ndị ọzọ, pịa bọtịnụ nwere atọ ntụpọ ndokwa.
Site na ndepụta e nyere, họrọ Mepụta Style.
Ugbu a na ị nọ na peeji nke ahụ na ntinye nchịkọta nchịkọta pụrụ iche, ị nwere ike ịmalite usoro nke gbanwere VKontakte font.
N'ọhịa "Usoro 1" Ịkwesịrị ịbanye na njirimara ndị a na-esote, nke ga-emesị ghọọ isi ihe nke koodu dị n'isiokwu a.
Usoro a na-egosi na a ga-agbanwe ederede n'ime saịtị VKontakte dum.
Debe onye ọbụla n'etiti mgbatị na pịa ọnụọgụ abụọ "Tinye". Ọ bụ n'ebe e kere eke ka ị ga-etinye ebe ederede site na ntụziaka.
Enwere ike ileghara ndụmọdụ ahụ anya ma dee ederede niile na otu akara, ma imebi nke aesthetics nwere ike ịmegharị gị n'ọdịnihu.
Iji gbanwee font n'onwe ya, ị ga-eji koodu na-esonụ.
Dị ka uru, enwere ike ịnwe ụdị ederede dị iche iche dị na sistemụ arụmọrụ gị.
Iji gbanwee ụdị ntinye, gụnyere nọmba ọ bụla, jiri koodu a na akara na-esonụ:
ụdị nha: 16px;
Biko mara na ọnụ ọgụgụ ahụ nwere ike ịtọ ọ bụla dabere na mmasị gị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta akwụkwọ a rụchara, ị nwere ike iji koodu ahụ gbanwee ụdị nke ederede.
Na nke a, uru nwere ike ịbụ otu n'ime atọ:
nkịtị bụ ihe nkịtị font;
a na-asụgharị italic;
oblique - oblique.
Ịmepụta abụba ị nwere ike iji koodu na-esonụ.
Code a kapịrị ọnụ na-ewere ụkpụrụ ndị a:
100-900 - ogo ogo ọdịnaya;
Obi ike - ederede obi ike.
Dị ka mgbakwunye na ụdị ọhụrụ ahụ, ị ​​nwere ike ịgbanwe agba ya site na ịpị koodu ọzọ.
agba: isi awọ;
A pụrụ igosi agba ọ bụla dị na ebe a site na iji ederede aha, RGBA na HEX koodu.
Iji gbanwere agba a gbanwere na saịtị VK, ị ga-agbakwunye na mmalite nke koodu ahụ e mepụtara, ozugbo ị gachara "ahụ"site n'inwe ndepụta, nkewa nkewa, ụfọdụ mkpado.
Anyị na-akwado iji koodu anyị, ebe ọ na-eburu ihe odide niile na saịtị VK.
Iji lelee otú e si kee ihe e kere eke na weebụsaịtị VK, jupụta n'ọhịa n'akụkụ aka ekpe nke ibe. "Tinye aha" wee pịa "Chekwa".
Jide n'aka na ịlele "Kwadoro"!
Dezie koodu ka imewe ahụ mejupụta echiche gị.
Mgbe ịmechara ihe niile n'ụzọ ziri ezi, ị ga-ahụ na font na saịtị VKontakte ga-agbanwe.
Echefula iji bọtịnụ ahụ "Zuru ezu"mgbe ụdị dị njikere.
Anyị na-atụ anya na n'ime usoro ị na-amụ ihe ị na-enweghị ihe isi ike na nghọta. Ma ọ bụghị ya, anyị na-enwe obi ụtọ mgbe niile inyere gị aka. Ihe kacha mma!